नयाँ वर्ष २०१७मा जापानी बजारमा अाएका ‘नयाँ लक्की व्याग’ – Nepal Sandesh
नयाँ वर्ष २०१७मा जापानी बजारमा अाएका ‘नयाँ लक्की व्याग’
जापान । जापानमा नयाँ वर्षको अवसरमा डिपार्टमेन्ट स्टाेर तथा सपिङ मलहरुमा नयाँ झोला किन्नेको निक्कै घुईचो लाग्ने गर्दछ । वास्तवमा जापानमा नयाँ सालमा नयाँ व्याग किन्नुको अर्थ भाग्यशाली व्याग भित्राउनु हो ।
के हो त भाग्यशाली झोला?
जापानमा वर्षेनी नयाँ वर्षको अवसरमा यस प्रकारका व्यागहरु खरिद गर्ने गरिन्छ । फुकुबुकुरो जापानी नामले चिनीने लक्की व्याग जापानी नागरिकरुले नयाँ वर्षको गुड लकको रुपमा किन्ने गर्दछन ।यस वर्ष पनि नयाँ वर्ष २०१७ काे अवसर पारेर विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न ब्रान्डका लक्की झाेलाहरू विक्रीमा राखेका छन ।
1. Francfranc’s 2017 HAPPY BOX
यस ब्रान्डका झोला मन पर्नेहरुका लागि कम्पनीले नयाँ वर्ष २०१७ को अवसरमा जनवरी १ देखि ह्पाप्पी बक्स विशेष छुटमा बेचिरहेको छ । ह्याप्पी बक्स र व्युटी ह्याप्पी बक्स दुई नामबाट बजारमा ल्याईएको व्यागको खरिद मुल्य ५ हजार यान राखिएको छ । स्वस्थ्य र सुखद जिवनशैलीको बढावा दिने यी व्यागको खरिदका लागि लक्की टिकटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
2.Eggs ‘n Things’ First Fukubukuro LUCKY BAG
त्यस्तै एग एन्ड थिङ्सले पनि २०१७ जनवरी १ देखि लक्की व्याग नामकाे झोला बिक्रीका लागि राखेको छ । यो व्यागको खरिद मुल्य ३ हजार यान रहेको छ । जापानी नागरिकहरूले मात्र कम्पनीले ताेकेकाे मुल्यमा साे व्याग खरिद गर्न पाउने छन ।
3.Starbucks Coffee’s Fukubukuro 2017
स्टारबुक्स कफिले जनवरी १ देखि नयाँ वर्ष २०१७ को लक्की झोला बिक्री गर्न सुरू गरेको छ । ६ हजार यान खरिद मुल्य तोकेको सो व्याग जापानीहरुले मात्र तोकिएको मुल्यमा खरिद गर्न पाउने छन ।
4.L’Occitane’s New Year Happy Bag 2017
यस कम्पनीले नयाँ वर्ष २०१७मा नयाँ लक्की व्याग लन्च गरेकाे छ । यस व्यागको खरिद मुल्य १० हजार ८ सय यान राखिएको छ ।
5.KALDI’s Fukubukuro 2017
काल्डी कम्पनीले ८ प्रकारका भाग्यशाली झोलाहरुलाई चार वर्गमा विभाजित गरि लन्च गरेको छ । यस कम्पनीले फुडस्टप तथा जापानी शैलीका व्यागहरुका साथमा खाजा,वाईन कफि आदि विक्रीमा राखिएको छ ।
Shokuhin Fukubukuro (3,500 yen)
Moheji Fukubukuro (2,000 yen)
Coffee Fukubukuro (1,700 yen) – contains New Year blend, Jewelry blend, and Kilimanjaro blend
Coffee Fukubukuro Kodawari Set i.e. preference set (2,700 yen) – contains Blue Mountain blend, Woman’s Hand Fair Trade Guatemala, premium mocha blend, and New Year blend
Coffee Fukubukuro Zeitaku Set i.e. luxury set (5,000 yen) – contains Blue Mountain No.1, Mocha Mattari, and Hyakunenki Coffee i.e. hundred-year tree coffee
Wine Fukubukuro CH.&A. Prieur Grand Prieur Millesime Brut (2,800 yen)
Wine Fukubukuro Tenuta Oliveto Brunello di Montalcino (3,000 yen)
Wine Fukubukuro Chateau Malescot Saint-Exupery (5,000 yen)